किन केही मानिस निद्रामा बर्बराउँछन् ? - Internet Khabar
December 29, 2017 Internet Khabar
काठमाडौं । हामीमध्ये केहीलाई निद्रामा कुरा गर्ने बानी हुन्छ । राति सुतेका बेलामा यसरी बर्बराउनुलाई सोम्नीलोकी भनिन्छ। यो कुनै रोग होइन तर यसरी निद्रामा बर्बराउँदा तपाईंसँगै सुत्ने मानिसलाई डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ।
विद्यालय जाने बच्चाहरूमाथि गरिएको एक अध्ययन अनुसार तीनदेखि दश वर्षका बच्चाहरूलाई निद्रामा बर्बराउने बानी हुन्छ । तर दश प्रतिशतभन्दा कम बच्चा दिनदिनै राति बर्बराउँछन् । ठूलो हुँदै गएपछि यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ । यसका लागि केही गरिरहनुपर्दैन।
तपाईंको परिवारमा कसैलाई निद्रामा कुरा गर्ने बानी छ भने तपाईंलाई पनि हुनसक्छ । यसका साथै तपाईंका मातापितामा यो समस्या थियो भने आनुवंशिक रूपमा यो सर्न सक्छ। तपाईंलाई निद्रासम्बन्धी रोग छ भने पनि बर्बराउनुहुन्छ । चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुस् ।
मानसिक तनाव लिने र अत्यधिक सोच्ने बानी हटाउनुभयो भने पनि यो समस्या समाधान हुन्छ । मनलाई शान्त राख्नका लागि नियमित योग र ध्यान गर्नुस् । अनि आफूसँग सुतिरहेको मानिसलाई आफूले बर्बराउनेबित्तिकै उठाइदिन भन्नुभए हुन्छ। एजेन्सी
के तपाईं पानी पर्याप्त पिउनु हुन्छ ? सावधान !